Nantsoina hoe ozin'izao tontolo izao foana i Shina. Miaraka amin'ny fanatsarana ny tanjaka ara-toekarena feno an'i Shina, ny fahafahan'ny tsena goavambe dia nahatonga ny tsena sinoa tsy maintsy jerena amin'ny marika iraisam-pirenena. Ireo orinasa iraisam-pirenena sy marika iraisam-pirenena dia nirohotra nankany amin'ny tsena sinoa ary nampiroborobo ny indostrian'ny fiara Sinoa. Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny famatsiana, ny World Factory Auto Network dia mandray ny karazana vokatra fiara sinoa. Nanjary toeram-pivoriana ho an'ny famatsiana fiara manerantany i Shina ary nanjary toerana lehibe ho an'ireo mpividy iraisam-pirenena.
Miaraka amin'ny fanavaozana ny fanjifana fiara, ny tsenan'ny famatsiana fiara dia mila vokatra vaovao koa hanaraka. Nampidirinay landy tongotra tia fihinan'ny tontolo iainana ny tsindrona TPE, ary niteraka ny pataloha tongotra TPE Alemanina sy Aostraliana, nitondra traikefa mitondra fiara mahasalama sy azo antoka kokoa ho an'ny tompona fiara!
Voalohany indrindra, andao hiresaka ny fahasamihafana misy amin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona sy ny fizotran'ny blister:
1: Fahasamihafana amin'ny akora
Ny dingan'ny famolavolana tsindrona dia mila havaozina miaraka amin'ny akora TPE tsy misy fangarony 100%, ary ny fizotran'ny lozisialy dia matetika mifangaro amin'ny TPO na TPV toy ny TPE, ary ny fahadiovan'ny blister dia tsy tsara toa ny famolavolana tsindrona. Noho izany, ny tsihy fiara feno TPE feno lasitra iray dia hanana endrika milamina kokoa, manakaiky ny fingotra ary fahatsapana tongotra tsara kokoa. Ny vokatra vita amin'ny teknolojia blister dia mafy, mitovy amin'ny plastika, ary hahatsapa ho reraka rehefa mitondra fiara lavitra.
2: fahasamihafana amin'ny faharetana
Ny tady tongotra vita amin'ny TPE vita amin'ny tsindrona dia manana fikirizana. Aorian'ny fivoarany amin'ny vanim-potoana fampiasana taty aoriana, dia azo averina amin'ny endriny tany am-boalohany izy tamin'ny fandatsahana rano mangotraka na fampisehoana azy amin'ny masoandro mandritra ny fotoana iray.
Fitsapana deformation de mat ny fiara DEAO: avereno ny endrika tany am-boalohany aorian'ny fisehoana ora maro.
Hifintina ireo pads blister aorian'ny fampiasana 1-2 taona ary tsy azo averina amin'ny laoniny.
Ny mampiavaka azy roa dia avy:
Ireo akora vita amin'ny fizotran'ny tsindrona dia atsofoka ao anaty masinin-tsolika tsindrona ary aidina amin'ny hafanana ambony alohan'ny hamolavolana azy ao anaty lasitra.
Ny fizotran'ny blister dia ny fanamboarana ravina ho takelaka fisaka aloha, ary avy eo afanaina mba halefaka sy halefany amin'ny lasitra mba hangatsiaka sy hamolavola.
Ny vokatra izay mitovy amin'ny tsindrona dia manana ny endrik'ilay vokatra, raha ny vokatra blister dia iray ihany amin'ny endrika miolaka, ary ny fanarenana voajanahary dia ambany lavitra noho ny teo aloha.
Tsihy fiara blister ho an'ny tompona fiara.
3: Fahasamihafana amin'ny famolavolana endrika
Ny tombony amin'ny fampiasana lasitra fanindronana manokana sosona roa sosona dia ny endriny ambonimbony azo noforonina betsaka kokoa, manome toerana ho an'ny mpamorona bebe kokoa ny mpamorona.
Izahay dia nanamboatra firafitra manokana ho an'ny marika tsirairay, ary manankarena kokoa ny antsipiriany, ary ny firafitra tsirairay dia misy patanty modely ao aoriany.
Ny lasitra blister dia tsy afaka manamboatra tsipika tsotra fotsiny, mitovy.
4: fahasamihafana amin'ny famolavolana buckle
Ny buckle sosona roa sosona noforonin'ny fizotran'ny famolahana tsindrona dia mateza kokoa. Ny fanambanin'ny kapany amin'ny tongotra dia natao miaraka amina mpanamafisana anti-deformation fanampiny. Ny buckle koa dia atsindrona avy amin'ny bobongolo avo lenta avo lenta, izay matanjaka kokoa.
Na izany aza, somary manify ny fizotran'ny blister. Raha noforonina ny fefy roa sosona, dia fitsapana lehibe ny tanjaka sy ny faharetan'ny tsihy fiara. Izany no iray amin'ireo antony tsy ahitan'ny tsihy fiara blister any ivelany ny famolavolana sosona roa sosona.
Ary farany, maninona i Deao no miziriziry manao TPE misy tsindrona iray monja tsihy fiaraS?
Satria ny DEA dia nanana traikefa be dia be tamin'ny fampivoarana ny mats fiara tany am-boalohany! Tianay ny hitondra tsihy fiara tsara kokoa amin'ny ankamaroan'ny tompona fiara. Ny tsihy fiara TPE feno novolavolaina an-tsokosoko vita amin'ny fiara no afaka mitondra traikefa mitondra fiara tena tsy misy dikany sy tsy misy fofona.